Isizathu Sokuba Simele Sibe Ngcwele | Funda
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseMexico Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMam IsiMarathi IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMixe IsiMongolia IsiMoore IsiNahuatl (saseCentral) IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTurkmen (SesiCyrillic) IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiUruund IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiWallisian
“Nimele nibe ngcwele.”—LEV. 11:45.
Kutheni ukuhlanjululwa kuka-Aron noonyana bakhe kumele kube nentsingiselo enkulu kubo bonke abantu bakaYehova?
Ukuthobela kwethu kudibene njani nokuzingqina kwethu singcwele?
Sifanele siwujonge njani umthetho kaYehova ophathelele igazi?
1. Incwadi yeLevitikus inokusinceda njani?
KWINCWADI yeLevitikus, igama elithi ubungcwele livela izihlandlo ezingaphezu kwezayo nayiphi na enye incwadi yeBhayibhile. Ekubeni olu phawu lufuneka kubo bonke abanquli bokwenene bakaYehova, ukuqonda iLevitikus kuya kusinceda ukuze nathi sibe ngcwele.
2. Ziziphi ezinye zezinto ezibalaseleyo kwiLevitikus?
2 Incwadi yeLevitikus, eyabhalwa ngumprofeti uMoses, iyinxalenye yaso “sonke iSibhalo” esiyingenelo ekufundiseni. (2 Tim. 3:16) Ngokomlinganiselo, igama likaYehova livela kalishumi kwisahluko ngasinye sale ncwadi. Ukuqonda iLevitikus kuya kusinceda siphephe nantoni na eya kubangela ukuba igama likaThixo ligculelwe. (Lev. 22:32) Ukuxhaphaka kwegama elithi “ndinguYehova” kule ncwadi kusenza sikhumbule ukuba simele sithobele uThixo. Kweli nqaku nakwelilandelayo, siza kungcamla kubuncwane obufumaneka kwiLevitikus, obuza kusinceda sibe ngcwele xa sinqula uThixo.
3, 4. Kwakufuzisela ntoni ukuhlanjwa kuka-Aron noonyana bakhe? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
3 Funda iLevitikus 8:5, 6. UYehova wamisela uAron ukuba abe ngumbingeleli omkhulu wakwaSirayeli, kwaye oonyana bakhe babeza kuba ngababingeleli bolo hlanga. UAron ufuzisela uYesu Kristu kwaye oonyana bakhe bafuzisela abalandeli bakaYesu abathanjisiweyo. Kodwa ngaba ukuhlanjwa kuka-Aron kwakufuzisela ukuhlanjululwa kukaYesu? Akunjalo, kuba uYesu wayengenasono kwaye ‘engadyobhekanga,’ ngenxa yoko kwakungeyomfuneko ukuba ahlanjululwe. (Heb. 7:26; 9:14) Noko ke, ukucoceka kuka-Aron kusibonisa indlela uYesu awayecoceke nawayelilungisa ngayo. Ngoko kufuzisela ntoni ukuhlanjwa koonyana baka-Aron?
4 Ukuhlanjwa koonyana baka-Aron kwakufuzisela ukuhlanjululwa okwakuza kwenziwa kubabingeleli basezulwini. Ngaba ukubhaptizwa kwabathanjiswa kwakunento yokwenza noku kuhlanjululwa koonyana baka-Aron? Hayi, kaloku ubhaptizo aluzihlambi izono; kunoko lufuzisela ukuzahlulela ngokupheleleyo komntu kuYehova uThixo. Abathanjiswa bahlanjwa “ngelizwi,” kwaye loo nto ifuna ukuba bazisebenzise ngokupheleleyo iimfundiso zikaKristu kubomi babo. (Efe. 5:25-27) Ngaloo ndlela bangcwele kwaye bahlambulukile. Kodwa kuthekani ‘ngezinye izimvu’?—Yoh. 10:16.
5. Kutheni sisithi abezinye izimvu bahlanjululwa ngeLizwi likaThixo?
5 Oonyana baka-Aron babengafuziseli “isihlwele esikhulu” sezinye izimvu zikaYesu. (ISityhi. 7:9) Ngaba ke nazo ezinye izimvu zenziwa zibe ngcwele zize zihlanjululwe ngeLizwi likaThixo? Kunjalo kanye! Xa abo banethemba lokuphila emhlabeni befunda oko iBhayibhile ikutshoyo ngokubaluleka nangokusebenza kwegazi elaphalalayo likaYesu, bayawakholelwa la mazwi baze banikele “inkonzo engcwele kuye imini nobusuku.” (ISityhi. 7:13-15) Umphumo wokuhlanjululwa ngokuqhubekayo kwabathanjiswa nabezinye izimvu ubonakala ngokuthi ‘babe nehambo entle.’ (1 Pet. 2:12) Umele ukuba uvuya ngokwenene uYehova xa ebona ucoceko nomanyano lwabathanjiswa nabezinye izimvu, abaphulaphula baze balandele uMalusi wabo, uYesu!
6. Kutheni simele siman’ ukuzihlola?
6 Into yokuba ababingeleli bakwaSirayeli kwakufuneka bacoceke emzimbeni ithetha lukhulu kubantu bakaYehova bale mihla. Abantu esifunda nabo iBhayibhile badla ngokuphawula indlela ezicoceke ngayo iindawo esinqulela kuzo kunye nendlela esicoceke nesinxiba kakuhle ngayo. Kodwa ke, ukucoceka kwababingeleli kusinceda siqonde ukuba nabani na onyukela entabeni kaYehova umele abe ‘ngohlambulukileyo entliziyweni.’ (Funda iNdumiso 24:3, 4; Isa. 2:2, 3.) Xa sinikela inkonzo engcwele kuThixo simele sicoceke engqondweni, entliziyweni nasemzimbeni. Oku kufuna ukuba siman’ ukuzihlola, kwaye abanye kusenokufuneka benze utshintsho olukhulu ukuze babe ngcwele. (2 Kor. 13:5) Ngokomzekelo, umntu obhaptiziweyo obukela iphonografi ufanele azibuze lo mbuzo, ‘Ngaba ndingcwele xa ndisenza le nto?’ Emva koko umele acele uncedo ukuze ayeke lo mkhwa mbi.—Yak. 5:14.
XA NITHOBELA, NIBONISA UKUBA NINGCWELE
7. Nguwuphi umzekelo owamiselwa nguYesu ngokuvisisana neLevitikus 8:22-24?
7 Xa kwakuqaliswa ilungiselelo lababingeleli kwaSirayeli, kwaye kwaqatywa igazi lenkunzi yegusha kwindlebe yasekunene, kusithupha wesandla sasekunene nakubhontsi wonyawo lwasekunene kuMbingeleli Omkhulu uAron nakoonyana bakhe. (Funda iLevitikus 8:22-24.) Le ndlela elalisetyenziswa ngayo igazi yayibonisa ukuba ababingeleli babeza kuthobela ngokupheleleyo xa besenza imisebenzi yabo. Ngendlela efanayo, uMbingeleli Omkhulu uYesu wabamisela umzekelo ogqibeleleyo abathanjiswa nabezinye izimvu. Wayemamela xa uThixo ethetha. Izandla zakhe wayesenza ngazo ukuthanda kukaYehova, kwaye iinyawo zakhe azizange ziphambuke kwikhondo elingcwele.—Yoh. 4:31-34.
8. Yintoni emele yenziwe ngabo bonke abanquli bakaYehova?
8 AmaKristu athanjisiweyo kunye nezinye izimvu zikaYesu zimele zigcine ingqibelelo njengoMbingeleli Omkhulu wazo. Bonke abanquli bakaYehova bamele baluthobele ulwalathiso oluvela kwiLizwi likaThixo baze ngokwenjenjalo bakuphephe ukuwenza buhlungu umoya wakhe. (Efe. 4:30) Bamele ‘bazenzele umendo othe tye iinyawo zabo.’—Heb. 12:13.
9. Bathini abany’ abazalwana abathathu abebesebenzisana kakhulu namalungu eQumrhu Elilawulayo, kwaye amazwi abo anokukunceda njani uqhubeke ungcwele?
9 Khawuve la mazwi asuka entliziyweni avela kubazalwana abathathu abanethemba lokuphila emhlabeni, nabaye basebenzisana kakhulu namalungu eQumrhu Elilawulayo kangangamashumi eminyaka. Omnye wathi: “Nangona eli ibililungelo lenkonzo elikhethekileyo, ukusondelelana naba bazalwana kuye kwandenza ndabona ukuba, nangona bethanjiswe ngomoya, abafezekanga. Sekunjalo, kuyo yonke le minyaka ndiye ndazibekela usukelo lokuthobela abo bakhokelayo.” Omnye yena wathi: “Izibhalo ezinjengeyesi-2 kwabaseKorinte 10:5, ezithetha ‘ngokuthobela uKristu,’ ziye zandinceda ndathobela ndaza ndasebenzisana nabo bakhokelayo. Ndiye ndathobela ngokusuka entliziyweni.” Ukanti owokugqibela wathi: “Ukuthanda izinto ezithandwa nguYehova nokuthiya azithiyileyo, kunye nokusoloko ulandela ukhokelo lwakhe noko kumkholisayo, kuthetha ukuthobela intlangano yakhe kunye nabantu abasebenzisayo ukuze aphumeze injongo yakhe emhlabeni.” Lo mzalwana wayefumanise ukuba uNathan Knorr, owaba lilungu leQumrhu Elilawulayo, wayeye wazamkela lula iingongoma ezazivele kwinqaku leMboniselo ka-1925 elithi “Ukuzalwa Kohlanga,” nangona zaziye zaphikiswa ngabathile. Ukuthobela kwakhe kwamchukumisa ngokwenene lo mzalwana. Ukucamngca ngamazwi ala madoda mathathu acatshulweyo kunokukunceda uthobele uze ube ngcwele.
UKUWUTHOBELA NGOKUPHELELEYO UMTHETHO KATHIXO NGEGAZI
10. Kubaluleke kangakanani ukuba sithobele umthetho kaThixo ngegazi?
10 Funda iLevitikus 17:10. UYehova wayalela amaSirayeli ukuba ‘angatyi naluphi na uhlobo lwegazi.’ Ukukhwebuka kwigazi—enoba lelesilwanyana okanye lelomntu—kuyafuneka nakumaKristu. (IZe. 15:28, 29) Kulisikizi kwaukuyicinga nje into ‘yokuchaswa’ nguThixo nokususwa kwibandla lakhe. Siyamthanda kwaye sifuna ukumthobela. Kwanaxa sijongene nokufa, sizimisele ukuba singahexiswa kukucengwa nakukunyanzelwa ngabantu abangamaziyo uYehova nabangenaxesha lakumthobela. Ewe kona, siyilindele into yokuba siza kwenziwa intlekisa ngenxa yokuba sizikhwebula kwigazi, kodwa ke sikhetha ukuthobela uThixo. (Yude 17, 18) Simele siwujonge njani lo mba ukuze senze “isigqibo esiqinileyo” sokungalidli igazi okanye sokungavumi ukutofelwa igazi?—Dut. 12:23.
11. Kutheni sisithi uMhla Wocamagusho waminyaka le wawungesosithethe nje esingenamsebenzi?
11 Ukusetyenziswa kwegazi lesilwanyana ngumbingeleli omkhulu wakwaSirayeli ngoMhla Wocamagusho waminyaka le kusinceda siqonde indlela uThixo alijonga ngayo igazi. Igazi laligcinelwa injongo ekhethekileyo. Loo njongo yayikukucamagushela izono zabo babefuna ukuxolelwa nguYehova. Igazi lenkunzi yenkomo nelebhokhwe kwakufuneka litshizwe phambi kwesigubungelo setyeya yomnqophiso. (Lev. 16:14, 15, 19) Oku kwakuhlahl’ indlela yokuba uYehova axolele izono zamaSirayeli. Ukongezelela koko, uYehova wayalela ukuba xa umntu eye wabulala isilwanyana ukuze asitye, kwakufuneka aphalaze igazi laso aze aligubungele ngomhlaba, “kuba umphefumlo wenyama usegazini.” (Lev. 17:11-14) Ngaba yayisisithethe nje esingenamsebenzi esi? Akunjalo. Ukusetyenziswa kwegazi ngoMhla Wocamagusho, kunye nomyalelo wokuba igazi liphalazwe emhlabeni, kuhambisana nomyalelo wangaphambili ophathelele igazi uYehova awayewunike uNowa nenzala yakhe. (Gen. 9:3-6) UYehova uThixo wayekwalela ukudliwa kwegazi. Ithetha ntoni loo nto kumaKristu?
12. Incwadi kaPawulos eyayisiya kumaKristu angamaHebhere yathi lidibana njani igazi nokuxolelwa kwezono?
12 Xa umpostile uPawulos wabhalela amaKristu angamaHebhere ewachazela ngamandla okuhlambulula asegazini, wacacisa wathi: “Phantse zonke izinto zihlanjululwa ngegazi ngokuvumelana noMthetho, yaye kungaphalalanga gazi, akubikho kuxolelwa.” (Heb. 9:22) UPawulos waveza nento yokuba imibingelelo yezilwanyana, nangona yayinexabiso elithile, yayisanela nje ukukhumbuza amaSirayeli ukuba ayenesono nokuba ayedinga nto ithile ukuze izono zawo zixolelwe ngokupheleleyo. Ewe, uMthetho ‘wawusisithunzi sezinto ezilungileyo eziza kuza, kodwa ungenawo owona mongo wezinto.’ (Heb. 10:1-4) Zaziza kuxolelwa njani ke izono?
13. Uziva njani ngento yokuba uYesu enikele ngexabiso legazi lakhe kuYehova?
13 Funda amaEfese 1:7. Ukufa kukaYesu Kristu, ‘owazinikela ngenxa yethu,’ kuthetha lukhulu kubo bonke abamthandayo nabathanda uYise. (Gal. 2:20) Kodwa ke, eyona nto yasikhululayo, yaza yenza sakwazi ukuxolelwa, koko kwenziwa nguYesu emva kokuba efile waza wavuka. UYesu wakuphumeza oko kwakufuziselwe kuMthetho kaMoses ngoMhla Wocamagusho. Ngaloo mhla, umbingeleli omkhulu wayethatha elinye igazi lezilwanyana ekubingelelwa ngazo aye nalo kweYona Ngcwele yomnquba, ibe kamva wayelisa kwitempile kaSolomon, alibeke phambi koThixo, ngokungathi umi phambi kwakhe. (Lev. 16:11-15) Ngendlela efanayo, uYesu wangena ezulwini nexabiso legazi lakhe njengomntu waza walibeka phambi koYehova. (Heb. 9:6, 7, 11-14, 24-28) Sinombulelo ongazenzisiyo ngokuxolelwa kwezono zethu nangokuhlanjululwa kwezazela zethu ngenxa yokuba sinokholo kwigazi likaYesu!
14, 15. Kutheni kubalulekile ukuqonda nokuthobela umthetho kaYehova ngegazi?
14 Ngaba uyasibona ke ngoku isizathu sokuba uYehova ayalele ukuba singaludli “naluphi na uhlobo lwegazi”? (Lev. 17:10) Usifumene isizathu sokuba uThixo ajonge igazi njengento engcwele? Emehlweni akhe igazi linexabiso elilingana nobomi. (Gen. 9:4) Uyabona ke ukuba sifanele siyamkele indlela uThixo alijonga ngayo igazi size sithobele umyalelo wakhe othi sizikhwebule kulo? Ekuphela kwendlela esinokuba seluxolweni noThixo ngayo, kukuba sibe nokholo kwidini lentlawulelo likaYesu size siqonde ukuba igazi lithetha lukhulu kuMdali wethu.—Kol. 1:19, 20.
15 Nabani na apha kuthi unokuzibona sele kufuneka enze isigqibo esiphathelele ukutofelw’ igazi. Okanye ilungu lentsapho okanye umhlobo osenyongweni kunokufuneka enze isigqibo esikhawulezileyo esiphathelele umba wegazi. Xa kuvela ingxaki enjalo, kuye kufuneke ukuba kwenziwe izigqibo nangeenxalenye zegazi neendlela zokunyanga. Ngoko, kubalulekile ukwenza uphando nokulungiselela iingxaki ezivela ngequbuliso. Ukwenza ezi zinto kunye nokuthandaza kuya kusinceda sime singagungqi kwaye singalalanisi kulo mba. Ngokuqinisekileyo asifuni kuyenza buhlungu intliziyo kaYehova ngokwamkela into ekhatywayo liLizwi lakhe! Oogqirha abaninzi kunye namagqwetha athile aye acenge abantu ukuba banikele ngegazi ukuze kusindiswe ubomi. Noko ke, abantu bakaYehova abangcwele bayayamkela into yokuba uMdali unelungelo lokugqiba ngendlela elimele liphathwe ngayo igazi. Emehlweni akhe, “naluphi na uhlobo lwegazi” lungcwele. Simele sizimisele ukuthobela umthetho wakhe ngegazi. Ihambo yethu imbonisa ukuba siwaxabisa ngokwenene amandla asindisa ubomi egazi likaYesu—ekuphela kwegazi elisenza sixolelwe izono kwaye sifumane ubomi obungunaphakade.—Yoh. 3:16.
Ngaba uzimisele ukuthobela umthetho kaYehova ngegazi? (Funda isiqendu 14, 15)
ISIZATHU SOKUBA UYEHOVA ALINDELE UKUBA SIBE NGCWELE
16. Kutheni abantu bakaYehova bemele babe ngcwele?
16 Xa uThixo wayehlangula amaSirayeli kubukhoboka baseYiputa, wathi kuwo: “NdinguYehova onikhuphe ezweni laseYiputa ukuba ndibe nguThixo wenu; yaye ke nina nimele nibe ngcwele, kuba ndingcwele mna.” (Lev. 11:45) Kwakulindeleke ukuba amaSirayeli abe ngcwele kuba uYehova ungcwele. Nathi maNgqina kaYehova simele sibe ngcwele. Incwadi yeLevitikus iyenza icace loo nto.
17. Uyijonga njani ngoku incwadi yeLevitikus?
17 Alithandabuzeki elokuba sizuze into eninzi ngokuxubusha iindinyana ezithile zeLevitikus. Esi sifundo simele ukuba siye sakwenza wayiqonda nangakumbi le ncwadi iphefumlelweyo yeBhayibhile. Ngokuqinisekileyo ukucamngca ngenye yale nkcazelo ixabisekileyo efumaneka kwiLevitikus kusenze saziqonda nangakumbi izizathu zokuba simele sibe ngcwele. Noko ke, bubuphi obunye ubuncwane esinokubufumana kule nxalenye yeLizwi likaThixo eliphefumlelweyo? Yintoni enye esinokuyifunda kuyo ngokunikelwa kwenkonzo engcwele kuYehova? Ezi nkalo siza kuzivelela kwinqaku elilandelayo.